ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7ကိုယ်တော်ကိုမတ်ေတာတျော၌ Fall Make မှရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 12 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ဒါကြောင့်သင်တစ်ဦးသည်လူအဘို့အဦးခေါင်းကို-over-ဒေါက်ပြိုလဲင်, ယခုအဘယျသို့? ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအောက်ကသူ့ကိုပင်နက်ရှိုင်းသငျသညျထက်လဲကျပါစေကူညီပေးပါမည်.
ရိုးရှင်းသောအဆင့် #1: အမြဲတမ်းပြုံးနေ
အဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှစစ်မှန်သောအပြုံးဖလက်ရှ်သင်ခဉျြးကပျကွညျ့ရှုစေသည်. သင်တို့အဘို့ဤအဆုရအပြုံးသင့်ရဲ့ကောင်လေးသို့မဟုတ်ကာလ၌ယခုအချိန်တွင်ရည်ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်, ပြုံးအလှည့်၌သင်တို့၏ကောင်လေးသင်တို့နှင့်အတူပိုပြီးအချိန်ဖြုန်းချင်ဖြစ်စေမည်ဟုရာသငျသညျပျြောရှငျပါစေကူညီပေးပါမည်.
အဖျား: သင်၏မေတ္တာနှင့်အတူမျက်လုံးချင်းအောင်သောအခါ,, ဖြည်းဖြည်းချင်းကအားလုံးကိုကိုသင်၏မျက်နှာပေါ်မှာဖြန့်ခွင့်ပြုပြုံး. သူသတိပွုမိသည်နှင့်တပြိုင်နက်, နှင့်အနောက်တိုင်းကဆင်းကြည့်ရှု. ဒါဟာသင်တွန်းလှန်စေမည်.
ရိုးရှင်းသောအဆင့် #2: သင့်အနေဖြင့်အကောင်းဆုံးပြရန်
မည်သူမဆိုများအတွက်ပြောင်းခြင်း, တယောက်တည်းပါစေလူတဘေးအန္တရာယ်များအတွက်စာရွက်ဖြစ်ပါသည်. ငါတို့ရှိသမျှသည်အံ့သြဖွယ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များရှိဒါဘာကြောင့်သူတို့အားမီးမောင်းထိုးပြမ? ဒီသင်ယုံကြည်ကိုးစားဝါကြွားလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်ကြောင့်အများကြီးပိုဆွဲဆောင်သင့်ရဲ့လူအားဖြစ်စေမည်မသာ.
အဖျား: ရိုးရှင်းစွာအအားထုတ်ကြည့်ကောင်းရှုကောင်းစေ. သန့်ရှင်း Style ကိုသင့်ဆံပင် Keep, တစ်ဦးလက်မှတ်ရနံ့ကိုရှာဖွေ, အမြဲလတ်ဆတ်တဲ့ထွက်သက်ဝင်သက်များ, နှုတ်ခမ်းနီဝတ်ဆင်, နှင့်သင်၏ဗီရိုသန့်ရှင်းစက်ချုပ်သည်သေချာအောင်.
ရိုးရှင်းသောအဆင့် #3: နက်နဲသောအရာဖြစ်ပေ Be
အဖျား: သူသည်သင်၏ပုံပြင်အကြောင်းကိုမေးတယ် အကယ်., ပြုံးနဲ့ဆိုရပြီးတော့သူ့ကိုအနည်းငယ်အသေးစိတျကိုသာပြောပြ “ငါနောက်ထပ်အချိန်များအတွက်ကယ်တင်မည်ကြွင်းသောအရာ”. လည်း, သူ့ကိုသင်ဆက်သွယ်ပါရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်း. ရတဲ့အခါသူမ, ချက်ချင်းပဲတုံ့ပြန်ရန်မဟုတ်သေချာအောင်. မသာသူသည်သင်တို့နှင့် ပတ်သက်. တစ်ခုလုံးကိုအချိန်စဉ်းစားကြလိမ့်မည်သို့သော်သူသည်လည်းသင်တို့ရှိသမျှသည်နေ့ကသူ့ကိုအပေါ်အရူးဖြစ်ကြထက်လုပ်ဖို့အခြားအမှုအရာရှိသည်သောအထင်ကြီးလိမ့်မည်.
ရိုးရှင်းသောအဆင့် #4: အမြဲတမ်းပိုလိုသောကိုယ်တော် Leave
ပိုပြီးချို့တဲ့သင့်ရဲ့ယောက်ျားသည်စွန့်ခွာအမြဲကောင်းတစ်ဦး idea က. သင်စကားလက်ဆုံအဆုံးသတ်ပါကဟောင်းနွမ်းခြင်းနှင့်ငြီးငွေ့စရာရရှိသွားတဲ့မပြုမီ, သူချက်ချင်းသငျသညျနှစျဦးဆွေးနွေးချက်လာမည့်အချိန်ကိုမျှော်ကြည့်ရှုမည်.
အဖျား: ကစာပို့င်ပဲဖြစ်ဖြစ်, အီးမေးလ်ပို့ခြင်း, ငြိမ်ဝပ်စွာနေဖြစ်ပေါ်မီကတစ်ခုသို့မဟုတ်မျက်နှာ-to-မျက်နှာစကားဝိုင်းကိုစကားလက်ဆုံရပ်တန့်. လည်း, Obsessed သူ့ကိုမဆက်သွယ်ရန်သေချာစေပါ. သင်သည်ကိုယ်ကိုလည်းမရရှိနိုင်ပါစေလျှင်, သငျသညျလညျးအစော်ကားသောပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
ရိုးရှင်းသောအဆင့် #5: မသိမသာပရောပ
သိမ်မွေ့အဆုံးသတ်ခြင်း, flirtatious အရိပ်အမြွက်သူ့ကိုနှစ်ခုဖွံ့ဖြိုးဆဲသောဆက်ဆံရေးအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရဖို့ကူညီပေးပါမည်.
အဖျား: အခန်းထဲအနှံ့မှသူ့ကိုကြည့်ဖမ်းမိ Get, သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကားသူ့ကိုဆီသို့ဦးတည်သင့်ခန္ဓာကိုယ် angling အားဖြင့်ပွင့်လင်းစောင့်ရှောက်, နှင့်အခွင့်အလမ်းသူ့ကိုထုတ်ဖို့အလမ်းပေါ်လာသောအခါ. လည်း, သင်တို့ကိုအထံတော်သို့ဆွဲဆောင်ကြသည်သူ့ကိုပြပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစွာသင့်ရဲ့ဆံပင် twirl သို့မဟုတ်သင့်နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ဖို့ခွင့်ပြု.
ရိုးရှင်းသောအဆင့် #6: ကိုယ်တော်ကိုဆီသို့စဉ်းစား
သငျသညျသူကမေးတယ်မီကကူညီပေးဖို့အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းနှင့်ကမ်းလှမ်းမှုသည်အဘယ်အရာသတိထားမိကြောင်းပြရန်. သေးငယ်တဲ့အမူအယာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်, သင့်ရဲ့ရက်ရောတန်ဖိုးထားထက်ပိုပြီးဖွစျလိမျ့မညျ.
အဖျား: သူတစ်ဦးငြီးငွေ့စရာစီမံကိန်းကိုသို့မဟုတ်ဖျားနာ၏အလယ်၌တည်ရှိ၏ပဲဖြစ်ဖြစ်, သူနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းခြင်းဖြင့်သူ့ကိုသင်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုဖြင့်သင်သည်ထောက်ခံနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်.
ရိုးရှင်းသောအဆင့် #7: သူ၏အသက်တာ၌အပြုသဘောဆောင်သောအင်အားစုဖြစ်
အဖျား: အချို့သောအဆိုးမြင်စိတ်တွေများနှင့်မွညျတမျးအဆင်ပြေနေ, သူနွေးထွေးသောနှင့် fuzzy အဖြစ်အတူတကွသင်၏အချိန်အောက်မေ့ဒါကြောင့်အပြုသဘောသင်၏အသက်ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကြိုးစား.
ကမဖြစ်နိုင်သော်လည်း “လုပ်” မည်သူမဆိုတစ်ဦးအချို့သောလမ်းခံစားရ, သင့်ရဲ့အပြုသဘောနှင့်ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သဘာဝဖြင့်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်၌မိမိခံစားခကျြကိုအားပေးနှင့်နေစဉ်လိမ့်မည်.